Cylindrical Roller Bearings Manufacturers, mpamatsy - China Cylindrical Roller Bearings Factory
● Ny rafitra anatiny ny cylindrical-roller bearings manaiky ny-roller mba handamina mifanaraka, ary ny spacer retainer na mitoka-monina dia apetraka eo amin'ny rollers, izay afaka manakana ny fironan'ny rollers na ny friction eo amin'ny rollers, ary mahomby hisorohana ny fitomboana. ny rotaka mihodina.
● Mahazaka enta-mavesatra lehibe, indrindra mitondra entana radial.
● Mahazaka radial lehibe, mety amin'ny enta-mavesatra sy ny fiatraikany.
● Ny fanerena ambany, mety amin'ny hafainganam-pandeha ambony.
Lalana tokana Cylindrical Roller Bearings
● Single andalana cylindrical-roller mitondra afa-tsy radial hery, henjana tsara, fiantraikany fanoherana.
● Mety ho an'ny shafts fohy miaraka amin'ny fanohanana henjana, shafts amin'ny axial fifindran'ny vokatry ny thermal elongation, ary ny milina fitaovana amin'ny detachable bearings ho fametrahana sy disassembly.
● Izany no tena ampiasaina amin'ny lehibe maotera, milina fitaovana spindle, maotera eo anoloana sy aoriana manohana shaft, fiaran-dalamby sy ny mpandeha fiara axle manohana andry, maotera crankshaft diesel, fiara traktera gearbox, sns.
Roa roa sosona cylindrical Roller Bearings
●Misy cylindrical lavaka anatiny sy conical lavaka anatiny rafitra roa.
●Manana ny tombony amin'ny rafitra mirindra, henjana lehibe, lehibe mitondra fahafahana sy ny deformation kely aorian'ny mitondra entana.
●Afaka manitsy kely ihany koa ny fivoahana ary manatsotra ny firafitry ny fitaovana fipetrahana ho an'ny fametrahana mora sy disassembly.
Efatra-dalana Cylindrical Roller Bearings
● Efatra andalana cylindrical-roller bearings dia ambany friction ary mety amin'ny hafainganam-pandeha avo fihodinana.
● Ampiasaina indrindra amin'ny milina fikosoham-bary toy ny fikosoham-bary mangatsiaka, fikosoham-bary mafana ary fikosoham-bary, sns.
● Ny mitondra dia ny rafitra misaraka, mitondra peratra sy ny Rolling vatana singa azo misaraka tsara, noho izany, ny fanadiovana, fisafoana, fametrahana sy ny disassembly ny mitondra dia tena mety.